प्रधानमन्त्री किन डा. खतिवडाकै निरन्तरता चाहनुहुन्छ ? - Kanakai Khabar
आरपी शर्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‘कन्भिक्सन’ भएका नेता हुनुहुन्छ, यो कम्युनिष्ट राजनीतिमा चासो राख्ने र इतर राजनीति गर्नेहरुका लागि नौलो बिषय होइन । उहाँ कुनै बिषयबस्तु र व्यक्तिप्रति दृष्टिकोण बनाउन समय लिनुहुन्छ र बनाएपछि आकस्मिक केही नहुँदासम्म त्यसमा अडान राख्नुहुन्छ । अर्को पनि उहाँको बिशेषता छ–उहाँ फरक सोच्नुहुन्छ । र, त्यही काम फरक ढंगले गर्नुहुन्छ
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कतै देश गलत तत्वको हातमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसका लागि उहाँले खतिवडाको निरन्तरता खोज्नुभएको छ
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कतै देश गलत तत्वको हातमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता छ । त्यसका लागि उहाँले खतिवडाको निरन्तरता खोज्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीमात्र सही भयो भने हत्तपत संकट आउँदैन । अहिलेको निराशा त जर्बजस्ती सृजना गरिएको हो विकासलाई छोपेर । र, त्यसमा तिनै खराव तत्वको हात छ । त्यसैले सरकारले सिफारिस गर्ने कोटामा वामदेव होइन, खतिवडा उपयुक्त हुनुहुन्छ । उहाँलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ । फेरी यो सरकारमा निहित स्वायत्त अधिकार हो, पार्टीले डिक्टेट गर्ने होइन । ओली अडान त्यसअर्थमा सही छ । देश र जनताका लागि यो नै उपयुक्त कदम हुन्छ । चक्रपथ डटकमवाट
Previousकनकाईमा जिल्ला स्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिता हुने
Nextकनकाईमा महिला फुटबल प्रतियोगिता सुरु, उद्घाटन खेलमा आयोजक विजयी